सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लामा कहिले सुचारु हुन्छ विद्युत र सञ्चार सेवा ? – Bannigadhi Today
सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लामा कहिले सुचारु हुन्छ विद्युत र सञ्चार सेवा ?
बान्नीगढी संवाददाता २०७८ कात्तिक २, मंगलबार १४:१३
सुदूरपश्चिमका सात पहाडी जिल्लामा विद्युत र नेपाल टेलिकमको फोन तथा इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध छ। दुई दिनदेखि भइरहेका वर्षाका कारण विद्युतको प्रशारण लाइनमा समस्या आएको छ भने टेलिकमको लाइनमा पनि समस्या देखिएको छ।
विद्युत प्राधिकरण प्रादेशिक कार्यालय अत्तरियाका प्रमुख जंगबहादुर चन्दका अनुसार पहाडी सात जिल्लाकै विद्युत सेवा अवरुद्ध भएको छ। ‘कैलालीको खानीडाँडा नजिक १३२ केभी प्रसारण लाइनको टावर नै बिग्रीएको छ,’ उनले भने, ‘१३२ केभीमा मर्मतको जिम्मा अत्तरिया ग्रिडको हो। ३३ केभीमा पनि समस्या छ। आजसम्म मर्मत गरेर कम्तिमा डडेल्धरा र दीपायलसम्म विद्युत सेवा सुचारु गर्ने तयारी छ।’
प्रादेशिक कार्यालयका प्रमुख चन्द अहिले आफैं खानीडाँडा पुगेका छन्। विद्युत सेवा अवरुद्ध भएपछि पहाडी जिल्लाका बासिन्दासंग सम्पर्क हुन सकेको छैन। बाढीले पुगाएको क्षतिबारे पनि जानकारी आएको छैन। अधिकाशको फोन अफ छ।
पहाडी जिल्लामा नेपाल टेलिकमको फोन तथा इन्टरनेट सेवा पनि अवरुद्ध छ। नेपाल टेलिकम प्रादेशिक कार्यालयका प्रमुख नामाकर न्यौपानेले विद्युतका पोल भएर टेलिकमको अप्टिकल फाइबर विस्तार भएकाले सेवा अवरुद्ध भएको बताए।
‘सेवा अवरुद्ध भएपछि मर्मतका लागि विहान १० बजे नै टोली खटाएका थियौं,’ उनले भने, ‘तर भीमदत्त राजमार्ग ठाउँठाउँमा अवरुद्ध हुँदा विग्रिएको ठाउँसम्म पुग्नै मुस्किल छ।’ आजै सेवा सुचारु हुने उनको दाबी छ।